पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भन्छन्- ‘अग्रवाल डिन हुन मिल्दैन’ « News24 : Premium News Channel
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भन्छन्- ‘अग्रवाल डिन हुन मिल्दैन’
काठमाडौँ । पूर्वमहान्याधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्राडा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले पुनः डिनको जिम्मेवारी लिन नपाउने बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतले डा. शशि शर्मालाई डिनमा पुनरर्बहाली गरेसँगै अग्रवाल हटेका हुन्,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब आइओएममा नयाँ डिन नियुक्ति हुने हो । अग्रवालले कुन अधारमा पद सम्हाल्न गए त्यो सोचनीय विषय हो । सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बँुदामा शशि शर्मा पछि पुनः अग्रवाल डिन हुनु भनेको छैन ।’